Shirka Shiinaha iyo Afrika oo maanta ka furmaya Beijing |
Shirka Shiinaha iyo Afrika oo maanta ka furmaya Beijing
Magaalo madaxda dalka Shiinaha ee Beijing, waxaa maanta oo Isniin ah ka furmi doona shirka toddobaad ee Golaha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo (FOCAC).
Shirkan oo saddexdii sanaba hal mar la qabto, waxaa sannadkan cinwaan looga dhigay: ‘Afrika iyo Shiinaha: wadajir in loo qaabeeyo bulsho xooggan, oo leh mustaqbal wadaag ah, kaasoo ku dhisan iskaashi faa’iido u leh dhinacyada’.
Kulanka oo socon doona labo maalmood, waxaa ka qayb galaya wufuud tiradoodu kor u dhaafeyso 1000 qof oo ay ku jiraan madaxda 53 dal oo Afrikaan ah, ganacsato, cilmi baareyaal iyo xubno ka socda Midowga Afrika.
Madaxda FOCAC 2018 ka qayb galaysa waxaa kamid ah Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya, Maxamad Cabdullaahi Farmaajo iyo Wasiirka Ganacsiga Soomaaliya, Maxamad Cabdi Xayir Maareeye.
Ajandayaasha ugu muhiimsan ee kalkan diiradda la saari doono waxaa kamid ah, xoojinta xiriirka ganacsi iyo midka diblumaasiyadeed ee u dhexeeya Afrika iyo Shiinaha iyo weliba sidii Shiinuhu u kordhin lahaa maalgelinta iyo mashaariicda horumarineed ee uu ka fuliyo Qaaradda Afrika.
Taariikh kooban oo ku saabsan shirka FOCAC
Golaha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika (FOCAC) oo la asaasay sannadkii 2000, waxay ujeedada ka dambeysey ahayd sidii Shiinuhu xiriir diblumaasiyadeed iyo mid ganacsi oo xooggan ula yeelan lahaa Afrika.
Qorshaha Dowladda Shiinaha ayaa ahaa in Afrikaanka loola macaamilo hab ka duwan qaabka Reer Galbeedka, iyadoo dhammaan masaalixda Shiinaha loo marayo jidka wadahadalka iyo diblumaasiyadda, wax xadgudub ahna aan loo geysaneyney siyaasadda gudaha iyo madaxbannaanida dalalka Afrika.
Shiinaha ayaa labaatankii sano ee u dambeeyey ahaa suuqa ugu weyn oo Qaaradda Afrika wax kasoo iibsato, taas oo Shiinaha ka saacidday in uu noqdo quwadda labaad ee hoggaamisa dhaqaalaha dunida.
Dakhliga ganacsiga labo geesoodka ah ee Shiinaha iyo Afrika ayaa sannadkii 2000 ahaa $10.6 bilyan. Tiradaas ayaa 16 laab korortay sannadkan 2018, iyadoo gaartey $170 bilyan.
Shirkii kan ka horreeyey oo sannadkii 2015 lagu qabtay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa ballanqaaday in dalkiisu lacag dhan $60 bilyan ku maalgelin doono Afrika.
In ka badan 2000 oo shirkadood oo Shiinaha laga leeyahay ayaa xilligan ka hawlgala Qaarada Afrika, iyadoo tirada shirkadaha Shiineyska ee Afrika ka shaqeeyaa ay sannadkii 2005 ahayd 700 oo shirkadood keliya.
Shiinaha ayaa sidoo kale tan iyo sannadkii 2000 ka hirgeliyey 40 dal oo Qaaradda Afrika ka tirsan mashaariic horumarineed oo ay kamid yihiin: jidad laami ah oo ay wadarta dherekoodu gaarayso 3300km, 30 isbitaal, 50 dugsi iyo 100 xarumaha korontada laga dhaliyo ah.
Qaar kamid ah dadka dhaqaalaha ka faalloda ayaa walaac ka muujiyey saameyta marba marka ka dambeysa sii kordheysa ee Shiinuhu ku yeelanayo dhaqaalaha Afrika, maadaama sida ay ku doodayaan Shiinuhu debin-dhaqaale u dhigay dalal badan oo Afrikaan ah.
Khubarada dhaqaalaha ayaa qaba in Shiinuhu deymo tobannaan bilyan oo doollar gaaraya amaahiyey dalal aan awoodin in ay deymahaas dib isaga gudaan, taas oo fursad u siineysa inuu sida uu rabo u maamulo kaabeyaasha dhaqaalaha ee dalalka deynta lagu leeyahay.